देशको लागि यति धेरै लागि पर्नुभएका व्यक्तित्वलाई बचाउन पाउनु मेरो र समीक्षा भान्जीको भाग्य हो
Thursday, 19 Mar, 2020 1:11 PM
काठमाडौं,६ चैत–अन्जाना घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी भाइबुहारी हुनुहुन्छ । उहाँले ओलीलाई भारतको अपोलो अस्पतालमा १२ वर्षअघि मिर्गौला दिएर बचाउनु भएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीको दोश्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । उहाँ पूर्ण स्वस्थ हुनुहुन्छ र विस्तारै सक्रिय हुन थाल्नु भएको पनि छ । देश विकासको सपना देख्ने, त्यस्तो सोच राख्ने, कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बचाउन पाउनुलाई बुहारी अन्जान आफ्नो र भान्जी समीक्षाको भाग्य ठान्नुहुन्छ । उहाँसँग चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित अंश
प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपटक मिर्गौला दान गरेर बचाउनुभयो । अहिले फेरि उहाँको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भयो । कस्तो लागेको छ ?
अबको दुई तीन वर्ष त्यही मेरो मिर्गौलाले काम गरिदिएको भए उहाँको कार्यकाल पनि सकिने थियो । अनि उहाँको स्वास्थ्यको हेरचाह पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्थ्यो । त्यो भैदिएको भए राम्रो हुनेथियो भन्ने लागेको थियो तर सवै हामीले भनेजस्तो कहाँ हुन्छ र । उहाँजस्तो भिजन बोकेको अरू मान्छे हुनुहुन्न । अहिले पनि देशको लागि यति धेरै सोच्नुहुन्छ कि, हेर्नुहोस् त ! अस्ति भर्खर बाह्र दिन अस्पताल बसेर फर्किएलगत्तै काम गर्न थालिसक्नु भयो । यो चौध दिन अस्पताल बस्दा उहाँलाई देशको चिन्ताले कति पोलेको रैछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
फागुन २१ गते प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैथियो । त्यो दिन मनमा यति छटपटाहट भयो, भगवानलाई प्रार्थना गर्दै थिँए हे भगवान ! प्रत्यारोपण सफल भैदियोस् । अझ विशेषतः मैले पाथिभरा मातालाई खुब सम्झिँए । म सक्ने भएपछि दर्शन गर्न आउँछु भन्दै भाकल पनि गरेँ । जे होस् राम्रै भयो । प्रार्थना पनि सुनिदिनुभयो भगवानले । हुन त डाक्टर नै भगवान हुनुहुन्छ । उहाँहरूको कामका कारण प्रत्यारोपण सफल भयो । तर एक हिन्दू धर्मावलम्बी भएका कारण कतै न कतै आस्था चाहिँ लाग्ने नै रहेछ । उहाँको उपचार भइन्जेल चाहिँ बेचैनी भइ नै रह्यो । जब उहाँको होस् खुल्यो भनेपछि बल्ल आनन्द भयो ।
तपाईलाई किन प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दिनैपर्छ, उहाँलाई बचाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ?
मैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दिएको हैन । त्यस समय उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो । तर मलाई त्यतिबेला नै लागेको थियो कि, उहाँ देशको मुहार फेर्ने, स्पष्ट भिजन बोकेर हिँड्नु भएको नेता हो । मानिस एकदिन जन्मिएपछि मर्नु नै पर्छ । ममा उहाँको जतिको देश बदल्ने महत्वकांक्षा छैन । म त्यो गर्न पनि सक्दिन । तर उहाँमा त्यो उद्देश्य छ । देशका लागि केही गर्छु । मुहार फेर्छु भनेर उहाँ लागिरहनु भएकाले पनि त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि साथ दिएको हो । मलाई उहाँ अन्य नेताहरूभन्दा फरक लाग्छ किनकि उहाँ उदार हुनुहुन्छ । जे सोच्नुहुन्छ, त्यो बोल्नुहुन्छ अनि गर्ने कोशिस पनि गर्नुहुन्छ ।
मेरो बुवा पनि एउटा राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ । म देख्थेँ उहाँले आफनो अरूको केही नभनी निस्वार्थ भई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । कहाँ–कहाँ दुर्गमदेखि मानिसहरू सहयोगको आशामा आउने गर्थे अनि बुवाले पनि निस्वार्थ साथ दिनुहुन्थ्यो । जसले गर्दा एउटा राजनीतिकर्मी प्रति मेरो सकारात्मक भावना थियो । अनि सँगै अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो । पहिले पनि म अरूलाई सानो–सानो सकेको सहयोग गर्थेँ नै ।
मृगौला प्रत्यारोपणको दिन मनमा केही डर थियो कि थिएन ?
म प्रत्यारोपणमा सफल हुन्छ भन्नेमा चाहिँ ढुक्क नै थिएँ । किनकि डाक्टरहरू पनि निकै दक्ष हुनुहुन्थ्यो । अझ यसमा पहिले बाह्र वर्षअघि प्रत्यारोपण गराउनुभएकै डाक्टर पनि आउनुभयो भनेपछि झनै राम्रो हुन्छ भन्ने भयो । फेरि उहाँलाई राम्रो होस् भन्दै देशै भरिको कामनाले पनि उहाँलाई केही हुँदैन भन्ने भइरह्यो ।
तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला, प्रधानमन्त्री ओलीको अप्रेसन राम्रो होस् भनेर धेरैले आ–आफनो तरिकाले कामना त गरेका थिए नि । सबैको मनोकामनाले उहाँलाई राम्रो भयो पनि ।
प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको पहिलो भेट कहिले भयो । तपाईँ उहाँको कस्तो नाता हो ?
म केपी शर्मा ओलीको बुहारी हुँ । २०६१ माघ १९ गते विवाह भएपछि मात्रै उहाँसँग चिनजान भएको थियो । उहाँ कान्छो बुवाको छोरा हामीचाहिँ साहिँला बुवाको । हाम्रो बुवाहरू एउटै दाजुभाइ हो । मेरो माइती चितवन हो ।
कस्तो महशुस हुनेरहेछ देशकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो शरीरको अङ्ग दिँदा ?
आफैँले बारम्बार भनेर दिएकी थिएँ । दिन पाउँदा म खुसी थिएँ । मलाई दुखाईको पत्तो पनि भएन । म २१ वर्षकी थिएँ त्यो समयमा । मात्र दिन पाए हुन्थ्यो, बचाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्र भयो । मेरो श्रीमान र जेठाजूले पनि दिन खोज्नु भएको थियो तर मिलेन । प्रधानमन्त्रीले त मान्नु भएको थिएन । मैले नै जिद्दी गरेर दिएकी थिएँ । तर अहिले उहाँले विकास, समृद्धि र देशका लागि काम गरेको देख्दा चाहिँ खुब खुसी मिल्ने रहेछ ।
त्यो समयमा खासै चर्चा नभए पनि अहिले तपाईँ पहिलो मृगौलादाता भनेर चर्चा हुन्छ । कस्तो लाग्छ चर्चा सुन्दा ?
मैले भेट्दा उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो । खुसी लाग्छ चर्चा हुँदा तर कतिपयले विभिन्न लान्छना लगाउँदा भने नरमाइलो पनि लाग्छ । अँ अस्ति मात्र एकजना दाइले कति करोडमा मिर्गौला दियौ बहिनी ? भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो । सुन्दा नराम्रो त कति लाग्छ लाग्छ नि । तर मैले केही जवाफ दिइनँ किनकि भोलि औँला उठाउने बेला हाम्रो पनि आउँछ । पक्कै पनि परिवार भएकै मान्छे हुनुहुन्छ होला उहाँ पनि । भोलि यदि कसैलाई केही भएर आफूले दिनुपर्‍यो भने, अरू कसैले कतिमा दियौ भन्दा कस्तो महशुस हुन्छ उहाँले नै थाहा पाउनुहुन्छ । मैले पनि परिस्थितिले आफैँ जवाफ दिन्छ भनेर केही बोलिनँ ।
जीवन सानो त्यान्द्रोमा अड्केको छ । यसरी अड्केको जीवनमा आफूले देशकै लागि खाँचो भएको मानिसलाई अङ्ग दिँदा गौरवान्वित महशुस हुन्छ । म त यही भन्न चाहन्छु कि, मैले मेरो परिवारको अनि राष्ट्रको एक कुशल नेतालाई मिर्गौला दिएको हो । मैले निस्वार्थ दाजुलाई सहयोग गरेको हो, केही लिएको छैन । देशको लागि यति धेरै लागिपर्नुभएका व्यक्तित्वलाई बचाउन पाउनु मेरो र भान्जी समीक्षा दुवैको भाग्य हो । यति कुशल प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिन त जो पनि तयार हुन्छ नि तर यो हाम्रो भाग्य नै हो । हाम्रो मिर्गौला मिल्यो र उहाँको शरीरमा सफल रूपमा प्रत्यारोपण पनि भयो । उहाँ स्वस्थ हुँदा समग्र रूपमा सिङ्गो देशलाई नै सहयोग पुगेको छ । उहाँले देशमा परिवर्तन पनि ल्याईराख्नु भएको छ । बाटाघाटा निर्माणदेखि पुलहरू सँगै धेरै विकासका कामहरू भइरहेका छन् । उहाँको सन्तान पनि छैनन् । भ्रष्टाचार गर्ने विरुद्ध डटेर लाग्नुभएको छ । त्यो फाइदा नै हाम्रो पनि फाइदा हो । अरू व्यक्तिगत कामका लागि खासै केही जरुरत परेको छैन । चाहिने नै भए पहिल्यै शर्त राखिहाल्थेँ नि । फेरी त्यसरी शर्त राखे त त्यो किनबेच भैहाल्यो नि । आफन्तमा त्यस्तो किनबेच नै गर्ने हो भने त त्यो के को आफन्त ?
प्रधानमन्त्रीको परिवारमा बुहारी भएर जानुभएको छ, तपाईँको परिवार कस्तो परिवार हो ?
उहाँ छोरालाईभन्दा बुहारीलाई अनि छोरीलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ । हाम्रो परिवारमा नै घरको पुरुष सदस्य भन्दा महिला अगाडि हुनुहुन्छ । अनि प्रधानमन्त्री निकै शाहस भएको आँटिलो हुनुहुन्छ । उहाँले छोरी बुहारीलाई अगाडि बढ्न हौसला पनि दिनुहुन्छ । हाम्रो परिवारमा महिला सदस्यले धेरै माया पाउनुभएको छ । उहाँको परिवारको बुहारी हुन पाउँदा गर्व लाग्छ ।
अहिले तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ ?
एकदम ठीक छु । मिर्गौला सम्बन्धी केही समस्या आएको छैन । मिर्गौलाको लागि भनेर अहिलेसम्म सिटामोल जस्तो औषधि पनि खाएको छैन । त्योचाँही खुसीकै कुरा हो । अरु सामान्य मानिस जसरी नै मेरो दैनिकी पनि चलेको छ ।
भान्जी समीक्षा तपाईँको खासमा को पर्नुहुन्छ ?
हामी एउटै परिवारका हौँ । हाम्रो निकै नजिकको सम्बन्ध छ ।
भान्जी समीक्षाले तपाईँबाटै प्रेरित भएर प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दिनुभएको हो ?
उहाँ अलिअलि त प्रेरित हुनुभएको होला । तर उहाँ पनि म जस्तै स्वेच्छाले दिन चाहानुहुन्थ्यो । मलाई सोध्नुभएको थियो माइजु केही त हुन्न नी ? मैले भनेको थिएँ मलाई हेर्नुस । मलाई पनि दिन मन लागेको छ भन्नुभयो । उहाँको ब्लड ओ नेगेटिभ थियो । मिल्यो अनि भयो पनि ।
दोस्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको छ की छैन ?
प्रत्यारोपण पछि भेट नै चैँ भएको छैन । केही समयपछि जान्छु भेट गर्न ।